कर्पोरेट विशेष | Corporate Nepal
नयाँ सहरको बजेट खर्च १८ प्रतिशत मात्रै, ६ वटा सहरमा शून्य प्रगति
काठमाडौं । सरकारले एक दशक अगाडिदेखि सुरु गरेका विभिन्न स्थानका नयाँ सहरमा भएको बजेट खर्च नै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका नयाँ सहरमा औषत खर्च जम्मा १८.५२ प्रतिशत…
चौध मेडिकल कलेज किन अलपत्र परे ? यस्तो छ कारण (सूचीसहित)
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ मेडिकलले कले…
ज्योति लाइफको आईपीओबाट ‘बोरे’हरूमाथि नियन्त्रण सुरु, अर्को हप्ताबाट नयाँ केवाईसी
काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओबाट ‘बोरे’ प्रवृत्ति नियन्त्रणको सुरुवात भएको छ । एकै व्यक्तिले धेरै जना व्यक्तिको नाममा अवैधरुपमा सेयर हाल्ने प्रवृत्तिलाई ‘बोरे’ प्रवृत्तिको …
कानुनी बाटो खुलेको दुई वर्ष बित्यो, तर पुँजीबजारमा एनआरएनको लगानी अझै आएन्
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा चल्दै आएको धेरै बर्ष भयो । दुई वर्ष अगाडीबाट ऐन नै संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरियो । तर, अहिलेसम्म पनि प…
दुई पुनर्बीमा कम्पनी थप्नु पर्ने अध्ययन समितिको निश्कर्ष, कुनले पाउलान् लाइसेन्स ?
काठमाडौं । नेपालमा हाल एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी(नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी) छ । बीमा समितिमा अरु ४ वटा प्रस्तावित कम्पनीले दर्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । काठमाडौँ, जेन्यूयन, प्रुडेन्सियल र अन्नपूर्ण रि लाइसेन्स कुरेर बस…
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले चलाएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा सात वाणिज्य बैंकसहित ११ वटा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । मनमोहन मेमोरियल कलेज परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल …
काठमाडौं । तेस्रो पक्ष बीमाा (थर्डपार्टी इन्स्योरेन्स)को आफ्नै महत्व छ । यो सवारी साधनसँग सम्बन्धित् बीमा हो । सरकारले एक दशक अगाडि नै तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गरेको थियो । भवितव्यबाट सुरक्षण पाउन यो बीमा निकै उप…
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेको मनमोहन मेमोरियल सामूदायिक अस्पताल चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । दुई हजार ६२१ जना शेयर सदस्य रहेको यो सहकारी सञ्चालन भएको १५ वर्षसम्म लगानीकर्ता…
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीचको ‘बिग मर्जर’, कस्तो बन्ला नयाँ बैंक ?
काठमाडौं । नेपालका पूराना दुई ठूला बाणिज्य बैंकहरु हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टबीच हुन लागेको ‘बिग मर्जर’बारे सेयर बजारका लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा चासो निकै बढेर गएको छ । मर्जरको अन्…